[Sir Culus oo la helay] iyo Caddeyn ku socoto Umadda Somaliyeed:Qubuura Galeenka oo ay ku cadaatay dabadhilifnimada Tigreega iyo Isbaheysigoodii oo burburay(Hoos ka akhriso Qoraalka Sirta ah). | Halganka Online
[Sir Culus oo la helay] iyo Caddeyn ku socoto Umadda Somaliyeed:Qubuura Galeenka oo ay ku cadaatay dabadhilifnimada Tigreega iyo Isbaheysigoodii oo burburay(Hoos ka akhriso Qoraalka Sirta ah).
Jihaazka Amniga ee Xarakada Mujaahidinta Al-Shabaab waxaa uu usoo gudbinayaa Umadda Somaliyeed warqad caddeymo u ah dabadhilifnimada Qubuura Galeenka iyo burburka ku yimid, iyadoona laga helay sir culus oo fashileysa ajandayaashooda.
Hogaanada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa in muddo ah ku celcelinayay in Maleeshiyada Qubuura Galeenka ee Guriceel, Dhuusamareeb iyo Caabud Waaq joogta ay badaleen Ciidankii Tigreega ee dalka ka baxay isal markaana ay yihiin gacmo Tigree oo lagu fulinayo ajandayaal ay Itoobiya ku hongowday xaqiijintooda.
Muddo sanad ah kadib oo Kooxaha Qubuura Galeenka ay ku miciyo iyo rajo beeleen dagaalka dhiigga leh ee ay kula jiraan Xoogaga Islaamiga ah ayay soo ifabaxeysaa caddeymo muujinaya hadaladii ay hore u sheegeen hogaanada Al-Shabaab, waxaana la rumeysan yahay in qalabka Amniga iyo Sirdoonka Al-Shabaab uu aad kaga hormarsan yahay kuwa kale ee Somalida.
Xukuumadda Tigreega oo billow ilaa dhamaad abaabuleysay dagaalada Galgaduud ayaa noqotay mid waji gabax kala kulanta aragti kala duwanaanshiyaha dabadhilifyadeeda u adeega, kuwaasi oo u kala jajabay hababkii qabiilka ee laga tagay, qaab dano siyaasadeed balse wali mid waliba uu u sheeganayo Itoobiya in uu u taagan yahay xaqiijinta howshii loo igmaday ee aheyd ka sifeynta Somaliya mabda’a loo yaqaano ”Xagjirka Islaamka”.
Warqado badan oo caddeymo ah ayaa laga helay oo qaarkood Muqdisho laga diray halka marar badana si qarsoodi ah dalka Itoobiya ay ku tageen horboodayaasha Qubuura Galeenka halkaasi oo ay kasoo qaadayeen talada dagaalkooda iyo saanadda Milatari ee ay ku dagaallamaan.
Caddeynta hadda la baahinayo ayaa quseysa warqad qoraal ah oo 13-kii bishan loo gudbiyay Safaaradda Itoobiya ee Nairobi taasi oo garabkii Qubuura Galeenka ee qoray uu sheeganayay daacadnimada uu u hayo Itoobiya iyo sida uu u doonayo garabkiisa aqoonsi iyo taageero in loo siiyo.
Dhinaca aanu xogtan ka helnay ee nasoo gaarsiiyay warqadda ayaa sheegaya in macluumaad dheeraad ah oo aad u xasaasi ah ay hayaan balse ay doonayaan mid waliba xilligeeda in ay baahiyaan, waxaana ay sheegayaan xogta qaarkeed in howlgallo aan la shaacin lala sugayo.
Garabkaasi ayaa ka madax banaan Qubuura Galeenka Muqdisho iyo kuwa Galgaduud oo iyana isku biratumanaya isla markaana warbaahinta isu dhaafsanaya aflagaadooyinka, arrimahaasi oo dhanna waxay muujiyaan sida ay u bur bureen kooxahaasi maadaama ay adag tahay ku adkeysiga dagaal muddo dheer soconaya kaasi oo aysan wadi karin cid aaney dhaqaajineyn mabda’ saxan iskaba daayee in ay yihiin kooxo wakiillo ah oo fulinaya howl loo dirsaday.
Khilaafka xilligan taagan iyo burburka Qubuura Galeenka wuxuu sii niyad jabinayaa maamulka Meles Zenawi oo geed dheer iyo mid gaaban u fuulay horistaagidda baahitaanka Shareecada Islaamka ee dalka Somaliya iyo fashilinta yididiilada iyo rajada laga qabo dhamaan shucuubta Muslimiinta Geeska Afrika in laga xoreeyo nidaamyada dulmiga iyo xadgudubka.
« Ciidamada Xisbada wilaayada islaamiga ah Sh/ dhexe oo soo afjaray howl galo ay kula dagaalamayeen kooxaha burcadda ah ee dhibaateeya Shacabka Qarax ay ku halaagsameen Ciidan katirsan Riddada oo Galabta ka dhacay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho (Faah Faahin). »